SomaliTalk.com » JWXO
Home » Qoraallada Halkudhegga "JWXO"
Shirkii Xornima-Doonka Soomaaliyeed oo kusoo gabagaboobay Koonfur Afrika
Shirweynahii jaaliyada Somalida Ogadenia ee South Africa uga socday Port Elizabeth, kana soo qaybgaleen Boqolaal qof ooy kujiraan haayadaha xuquuqul insaanka ayaa jawi caadifad iyo cadho Ethiopia loo qabo kusoo gabgaboobay. Shirkan oo ah mid ay Jaaliyada Somalida Ogadenia sanad walba ku qabato Xorunta Jaaliyada oo Ku taala magaala Madaxda Gobalka Eastern Cape ee Port Elisabeth ayaa furmay maalintii...
Halkudheg: JWXO, ogaden
Banaanbax aad u xoog badan oo ka dhacay Magaalada London – Safaarada Itoobiya horteeda
Abaarihii 11 Duhurnimo ayaa waxa dad kasoo jeeda dhulka Somalida Ogadeniya waxa ay isasoo hor tubeen Safaarada Itoobiya ee ku taala London. dadkan oo kor udhaafaya 500- oo qof ayaa isugu jiray Caruur, haween, dhaliyaro iyo qeybaha kala gadisan ee bulshada sida culumo iyo aqoonyahanka Somalida Ogadeniya. Dadka mudaharadaya ayaa waxa ay kasoo horjeedaan Gumeysiga Ethiopia oo ka geystay dhulka Ogadeniya...
Dagaalka ka socda Raaso waxaa hurinaya Gumeysiga iyo adeegayaashiisa
Taliska gumeystaha ee Addis Ababa, suu u sii cimri dheeraysto wuxuu caado ka dhigtay inuu isku diro oo hubka isugu dhiibo shacabka walaalaha ah ee Somalida Ogadenya. Si uu qorshihiisa gumeysi iyo isir sifayntu ugu hirgasho wuxuu si xishood la´aan ah u adeegsadaa tabta lagu yaqaano gumeysiga ee ah qaybi oo xukun. Wuxuu Taliskaas dhiigya cabka ah iyo kuwa dhidid dhawrka ah ee uu ku adeegto ay si kumeel...
Halkudheg: JWXO, onlf
Xalka Ogadeniya iyo xasil la’aanta Geeska Afrika
Magaalada London ayaa waxaa lagu qabtay shir wayn oo oo lagaga hadlayay arrimaha Geeska Afrika iyo maaraynta dhibaatada Ogaadeenya. Shirkan waxaa soo agasintay Jaaliyadda Ogaadeenya ee wadanka Ingiriiska, waxaana ka qayb galay hoggaanka sare ee Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya JWXO, Madax ka socotay dalka Soomaaliya, Aqoonyahaniin Soomaaliyeed iyo dadwayne aad u fara badan oo isugu jira kuwo...